40 ny Airlines lehibe lasa: WTN Aviation Group namoaka fanambarana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 40 ny Airlines lehibe lasa: WTN Aviation Group namoaka fanambarana
Ny indostrian'ny fiaramanidina dia voa mafy tamin'ny areti-mandringana manerantany. Ny vondrona fiaramanidina tambajotra fizahan-tany eran-tany eo ambany fitarihan'i Vijay Poonoosamy any Singapore dia mahalala izany.
1) Tambajotra fizahan-tany manerantany Filohan'ny Vondrona fiaramanidina Hoy izy: “Tsy misy mahalala ny filalaovana izany rehetra izany, fa ny ara-dalàna vaovao kosa dia mila fisainana vaovao.
2) 40+ ny zotram-piaramanidina nianjera nandritra ny areti-mandringana COVID-19 hatreto
3) fatiantoka 118.5 miliara: afaka mamoaka kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ve ny governemanta?
Vijay Poonoosamy, filohan'ny vondrona fiaramanidina tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahan-tany dia naneho hevitra momba ny firodanan'ny zotram-piaramanidina maherin'ny 40 noho ny areti-mandringana COVID-19.
Amin'ny alàlan'ny fanakorontanana ny maodely nahatonga ny orinasam-piaramanidina velona na niroborobo noho ny elatry ny firoboroboan'ny fizahan-tany sy varotra manerantany, COVID-19 dia nanala ny elatry ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Seranam-piaramanidina maherin'ny 40 no nianjera hatramin'ny COVID-19 na teo aza ny fanohanan'ny governemanta USD173 miliara. Ny Airlines dia namoy ny USD 118.5 miliara tamin'ny taona 2020, manana trosa mihoatra ny USD 651 miliara ary, araka ny IATA, dia mila USD 80 miliara avy amin'ny governemanta.
Ankoatry ny zava-misy henjana amin'ny fahafahan'ny governemanta mamatsy vola ireo kaompaniam-pitaterana korontana, dia ny fanontaniana mafimafy kokoa momba ny famatsiam-bola toy izany raha tsy afaka mamorona ny tenany ireo kaompaniam-pitaterana mandritra ireo fotoan-tsarotra tsy manam-paharoa ho an'izao tontolo izao.
Tsy misy mahalala hoe hanao ahoana izany rehetra izany, fa isika kosa tokony hifoha ny zava-misy fa ny ara-dalàna vaovao dia mitaky maika ny fisainana vaovao hitady modely vaovao ho an'ny orinasam-piaramanidina velona azo tanterahina ary azon'ireo vondrom-piarahamonina ekena.
Ireo matihanina momba ny indostrian'ny dia dia nasaina hanatevin-daharana ny mpikambana avy amin'ny sehatra rehetra fananganana.travel adihevitra nataon'ny World Tour Network.
Fanazavana fanampiny: www.tv.travel